Filtrer les éléments par date : lundi, 06 septembre 2021
lundi, 06 septembre 2021 19:39
Kitra-Fifanintsanana Mondial : Hivantana amin'ny TVM ireo lalaon'ny Barea
Handeha mivantana ao amin'ny Televiziona Malagasy ireo lalao rehetra hatrehin'ny ekipam-pirenena Malagasy na Barea, izay ao anatin'ny fifanintsanana Mondial 2022.
Efa novidin'ny fitondram-panjakana ny zo hahafahan'ny Malagasy hijery ireo lalao rehetra ireo.
Madagasikara vs Tanzanie
République Démocratique Congo vs Madagasikara
Madagasikara vs République Démocratique Congo
Bénin vs Madagasikara
lundi, 06 septembre 2021 08:43
Atletisma – Tompondakan’i Madagasikara : Ny Faritra Atsimo Andrefana no nandrombaka medaly be indrindra
Tontosa tetsy amin’ny Kianja Alarobia, omaly alahady 05 septambra 2021, ny fiadiana izay ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny Taranja Atletisma.
Norombahan’ny Faritra Atsimo Andrefana ny medaly be indrindra. 27 ny medaly azon’ireo Atleta nisolotena ny Faritra, faharoa ny Faritra Analamanga ary fahatelo ny Faritra Atsinanana.
Tonga nanome voninahitra izany fandaharam-potoana izany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Rosa Rakotozafy, Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, ny Tale misahana ny fanomanana ireo taniketsan’ny fanatanjahantena Rajohanesa Harinirina Brice ary ny Talem-paritry ny tanora sy fanatanjahantena Analamanga Andriamampionona Njato Lalaina Harinoro.
lundi, 06 septembre 2021 08:42
6 septembre : Journée mondiale des lymphomes